တရုတ်အဆင့်မြင့်ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး, အမြင့်ရွက်တိုင်မီးခွက်, မီးအမြင့်ရွက်တိုင်အလင်းပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:high-ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး,အမြင့်ရွက်တိုင် Lamps,အမြင့်ရွက်တိုင်အလင်း,အမြင့်ရွက်တိုင်အလင်းဝင်ရိုးစွန်း,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လမ်းမီးစီးရီး > high-ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး
high-ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, high-ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး, အမြင့်ရွက်တိုင် Lamps ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အမြင့်ရွက်တိုင်အလင်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ဓာတ်လှေကားနှင့်မရုတ်သိမ်းအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပင်မလှံတံ၏အမြင့်ကိုမြှင့်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၈ မီတာထက်ပိုသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားလည်ပတ်မှုအဆင်ပြေသည်။ ဆီမီးခွက်သည်လုပ်ငန်းအနေအထားသို့တက်သည်၊ အလိုအလျောက်ချွတ်နိုင်သည်၊ မြောင်းဆွဲကြိုး၊...
အရပ်ရှည်ရှည်လှံတံကိုဆီမီးခွက် conical ဆီမီးခွက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်အရပ်ရှည်ရှည်ပါဝါလေ့ type ကိုဆီမီးခွက်ဘောင်ပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ကြောင်းသစ်ကိုစတိုင်အလင်းရောင် device ကိုအောင်အထက်သံမဏိ၏ 15 မီတာမှထောက်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူ,...
ဒါဟာအထက်သံမဏိ conical ဆီမီးခွက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်အရပ်ရှည်ရှည်ပါဝါ 15 မီတာမှလေ့ type ကိုဆီမီးခွက်ဘောင်ပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ကြောင်းသစ်ကိုစတိုင်အလင်းရောင် device ကိုညွှန်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူ, ပြည်တွင်းရေးဆီမီးခွက်လျှပ်စစ်,...
ယေဘုယျအားဖြင့်ကရုတ်သိမ်းအမျိုးအစားနှင့် Non-ရုတ်သိမ်းအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ရုတ်သိမ်း type ကိုအဓိကဘား၏အမြင့်ယေဘုယျအားထက်ပိုမို 18 မီတာဖြစ်ပြီး, လျှပ်စစ်ရုတ်သိမ်းစစ်ဆင်ရေးအဆင်ပြေပါတယ်။ မီးခွက်ပန်းကန်ပြုပြင်အနေအထားအထိမြင့်တက်သောအခါ,...
တရုတ်နိုင်ငံ high-ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး ပေးသွင်း
အဆိုပါ High-ရွက်တိုင်မီးအိမ်ယေဘုယျအားဖြင့်သံမဏိ taper အလင်းတိုင်များရေးစပ်နှင့် 15 မီတာသို့မဟုတ် above.It ၏မြင့်ပါဝါပေါင်းစပ်ဆီမီးခွက်ဘောင်ဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူ, ပြည်တွင်းရေးဆီမီးခွက်, လျှပ်စစ်လှံတံကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ပါသည်သောသစ်ကိုအလင်းရောင် device ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် .Lamp ခေါင်းကိုမော်ဒယ်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီ, အလင်းရောင်တိကျတဲ့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်; အတွင်းပိုင်းမီးခွက်အဓိကအား floodlights နှင့်စီမံကိန်းမီးခွက်၏ရေးစပ်နေကြသည်။ အဆိုပါအလင်းအရင်းအမြစ် NG400 မြင့်မားသောဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်ချမှတ်လျက်, အလင်းရောင်အချင်းဝက် 60 meters.The ဘားခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုမှသုံးကဏ္ဍများပါဝင်ပါသည်ထားတဲ့အသက် 15 မှ 40 မီတာအမြင့်နှင့်အတူသံမဏိပန်းကန်၏ဖန်ဆင်းသောပိရမစ်တည်ဆောက်ပုံ, ဖြစ်ပါတယ် ။
1. လှပပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ဧရိယာ, ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု, စုစည်းအလင်း, ယူနီဖောင်း illumination, အသေးစားတောက်ပခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူ။
2. သက်ဆိုင်သောသောနေရာများ: စသည်တို့ကိုမြို့စတုရန်း, ဘူတာရုံ, ဆိပ်ခံတံတား, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, အားကစားကွင်း, မြေပေါ်,
ပူ galvanizing Anti-ချေးကုသမှုမှတဆင့်ပိရမစ် splicing သံမဏိလှံတံ -3ဆီမီးခွက်ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ပေါင်းစုံသို့ကိုပုံသွင်းနေဖြင့်တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ်။
6. အလင်းရင်းမြစ်: 400W-1000W ဆိုဒီယမ်မီးခွက်သည်။
အမြင့်: 18m ကနေ 50 မီတာမှ
အဘို့အဝတ်စုံကို: အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, Expressway, Parkway, အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့အလယ်ပိုင်းကားလမ်းလမ်းဆုံ, ထရပ်ကားနှင့်ဘတ်စ်ကားဆိပ်ကမ်း, railyards, သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းဆီ, လေဆိပ်, ကူးတို့ဆိပ်ကမ်း, အကျဉ်းထောင်, စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များ, နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်။
ပုံသဏ္ဍာန်: ပတ်ပတ်လည်, Multi-Pyramids, ကော်လံသဏ္ဍာန်, အနားသို့မဟုတ် conical
Q345B / A572, နိမ့်ဆုံးအထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိကို> = 345n / mm2
Q235B / A36, နိမ့်ဆုံးအထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိကို> = 235n / mm2
Dimension ၏သည်းခံစိတ်: 2% ±
အလင်းရောင်ရင်းမြစ်: 400 W- 5000 W ကမြင့်မားသောဖိအားဆိုဒီယမ်သည်ရေလွှမ်းမိုးသောအလင်း, အလင်း extension ကို: 30 000 m²အထိ
System ကိုရုပ်သိမ်း: Lifter တစ်မိနစ်ကို3~5မီတာ၏မြန်နှုန်းရုတ်သိမ်းရေးနှင့်အတူတိုင်များ၏အတွင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ fixed
တပ်ဆင်ထားတဲ့အီး; ပုရွက်ဆိတ် ferromagnetism ဘရိတ်နှင့် -proof device ကိုခြိုးဖောကျ, ကို manual စစ်ဆင်ရေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်မှုအောက်တွင်လျှောက်ထား
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာ: လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသေတ္တာစစ်ဆင်ရေးဝါယာကြိုး .Time ထိန်းချုပ်မှုနဲ့အလင်းထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်သွားတိုင်ကနေ5မီတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရုတ်သိမ်းရေးသည်ဝင်ရိုးစွန်းတွေရဲ့ကိုင်ဖြစ် Full-ဝန်အလင်းရောင် mode နဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလင်းရောင် mode ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့တပ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Hot သို့ကျဆင်းလာ ASTM တစ်ဦးက 123, အရောင် polyester ပါဝါသို့မဟုတ်လိုအပ်သော client ကိုအားဖြင့်အခြားမည်သည့်စံပြီးနောက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။
ရိုးစွန်းဒေသများမှပူးတွဲ: Insert mode ကို, အတွင်းစိတ်အနားကွပ် mode ကို, ပူးတွဲ mode ကိုရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှာ။
ဝင်ရိုးစွန်း၏ဒီဇိုင်း: 8 တန်း၏မြေငလျင်ဆန့်ကျင်
လေတိုက်မြန်နှုန်း: 80 ကီလိုမီတာ / နာရီ
ဂဟေဆော်: ကျနော်တို့အတိတ်အားနည်းချက်စမ်းသပ်ခြင်းရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပနှစ်ဆဂဟေပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ဂဟေဆော်စေသည်
အထူ: 20 မီလီမီတာမှ6မီလီမီတာ
ကုန်ကြမ်းစမ်းသပ်→ဖြတ်တောက်ခြင်း→မှိုသို့မဟုတ်→ဂဟေဆော်ခြင်း (longitudinal) → Dimension စံကိုက်ညှိ→ Deburr →သွပ်ရည်စိမ်သို့မဟုတ်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း, →ထုပ်ပိုးပန်းချီ→ Recalibration → Thread →→ Flangewelding → Hole တူးဖော်ခြင်းအတည်ပြုရန်ကွေး
packages: ထိပ်နှင့်အောက်ခြေမှာ Mat သို့မဟုတ်ကောက်ရိုး Bale အားဖြင့်သာမန်အဖုံးအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထမ်းဘိုး, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းလိုအပ် client ကိုအားဖြင့်အောက်ပါနိုင်ပါတယ်
high-ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး အမြင့်ရွက်တိုင် Lamps အမြင့်ရွက်တိုင်အလင်း အမြင့်ရွက်တိုင်အလင်းဝင်ရိုးစွန်း high-ရွက်တိုင် Lamps